निशानको बिहे तर अ’चानक! भा’वुक हुँदै युवती मिडियामा “I love you निशान बिहे हुदैमा माया घ’ट्दैन” बिहेको फोटो देख्दा मुटु दु’ख्यो, आखिर के थियोे त! (भिडियो हेर्नुहोस) – Dainik Sangalo
August 23, 2020 597
पुर्बबाट आजभोलि एकपछी अर्को सुमधुर आवाजले नेपाली गित सङ्गीतलाई धेरै माथि पुर्याउदै गरेको अवस्था छ । निशान भट्टराई अर्थात नेपाल आइडलबाट एकाएक चर्चामा आएर अहिले बजार तताउदै गरेका छन । उनले भर्खरै बिहे पनि गरेका छन । तर अ’चानक एक युवती भा’वुक हुँदै मिडियामा आएर निशानका बारेमा आफुले गरेको प्रेमको बारेमा बताउदै यस्तोसम्म भनेकी छिन कि हेर्दा तपाई छ’क्क पर्नुहुनेछ । ती युवती पनि सारै मीठो आवाजकी धनी रहेकी छिन । उनले गित मार्फत पनि आफ्ना मनका बे’दना निशानलाई दिएकि छिन । बोल्दाबोल्दै भावुक हुँदै निशान र उनकि श्रीमतीलाई यस्तो सन्देश समेत दिइन कि हेर्ने जो कोहिको मन छुन सक्छ । एकपटक एउटि सुन्दरी मिडियामा आएकी छिन । जसको आवाजमा छुट्टै जादु रहेको पाइन्छ ।
निशान भट्टराई,एलिना चौहान,अन्जु पन्त,रचना रिमाल,नारायण गोपाल लगायत धेरै गायक गायिकाका गितहरु एकदमै राम्रो गाएर चर्चामा आएकि छिन । उनिमा अदभूत लुकेको प्रतिभा भेटिन्छ । काठमाडौमा बसोबास गर्ने जादुमय स्वरकि धनी करुणा दाहालको सानैदेखीको सपना गित गाउने रहेको बताउदै आखाभरी आँ’सु बनाइन । सपना गायक बन्ने भएपनी विभिन्न बा’ध्यताले कला लुकाएर बस्नुपरेको बताइन । उनले आजसम्म कहि कतै गित संगीत सिक्ने मौका पाएका छैनन तर उनको गायकी देखेर जो कोहि च’कित पर्छन । सुपर अनलाइन टिभीका संचारकर्मी तथा कलाकार समीर सुवेदीले लिएको अन्तर्वार्तामा उनले निकै राम्रा राम्रा गितहरु एकपछी अर्को गर्दै सुनाइन । पुर्व को झापा सरम्पाडा मा सामान्य परिवार मा जन्मिएकि करुणा मामलिको काख मा पुल्पुलिएर हुर्किएकि हुन ।
उनेले आफ्नो बाल्यकाल र कक्षा आठ सम्म को पढाई गौरादह स्थित आफ्नो मामाघर मा बसेर पुरा गरेकि हुन भने त्यसपछि को शिक्षा लाई काठ्मान्डौमा बसेर निरन्तरता दिई रहेकि छिन । सानै देखि चन्चल र मिजासिलि स्वभाव कि करुणा गाउमा भजन कृतन र सास्कृकिक कार्यक्रम हुदा गित गाउने र सधै अग्रसर हुने गर्थिन । पढाई र गायन दुबैलाई सगै लैजाने उनको लक्ष्य रहेको बताइन । अन्तरवार्ताकै क्रममा प्रेम सम्बन्धको कुरा गर्दा भा’वुक हुँदै माया गरेको मान्छेको बिहे भयो भनिन तर निशान भट्टराईले बिहे गरेपनी आफुले गर्ने मायामा क’मी नआउने बताउदै निकै भा’वुक बनिन । उनले भा’वुक हुँदै यस्तोसम्म भनिन तलको भिडियो हेर्नुहोला तपाईंको म’न छुनेछ |
Prevनेपालमा कोरोनाका कारण थप एक जनाको गयो ज्यान
Nextठाउँठाउँमा सडक अवरुद्ध भएपछि स्टेचरमा राखेर बिरामीलाई स्वास्थ्य केन्द्र लगिँदै
प्रहरीसँगको झ,डपमा पूर्वमन्त्री यादवको अण्डकोष फु,ट्यो !, काठमाडौं पठाइयो
चन्दा उठाएको यति धेरै रकम विप्लव समूहले गरे स्थानीयलाई फिर्ता गरे, चन्दा उठाउनेलाई पनि कारवाही
फोनमा कुरा गरिरहेका बेला ३ घरको तलमाथीबाट खसेर २३ वर्षे विकासको गयो ज्यान
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (50396)